Inqanaba elitsha lokungena kwefowuni iSony Xperia J | I-Androidsis
Mailen bravo | | Iiselfowuni, Sony, Tutorials
USony ulandele umgaqo-nkqubo osebenzayo kusapho lwakhe olutsha lwe Iifowuni ze-Xperia. Ngexesha lika-2012 ukwaziswa kunye nokwaziswa kwenkampani yaseJapan kuye kwahluka kakhulu, kodwa ngoku xa i-IFA 2012 isondela, kuza ezinye izibhengezo.
Kubonakala ngathi injongo elandelayo ye Sony ngomgca Iifowuni ze-xperia Kukuba yindawo yokuqala yenqanaba lokungena kwinqanaba le-Android. Ngokungafaniyo nemodeli yeXperia T, eyilelwe uluntu olunyanzeliswa ngamandla amakhulu okuthenga, imodeli entsha yakwaSony Xperia J iya kwelinye icala lentengiso, ifezekisa ukuthengisa okukhulu kwinqanaba lokungena kwinqanaba lokungena.
Iselfowuni entsha iya kuba nescreen esine-intshi ezi-4 kunye nesisombululo see-pixels ezingama-854 x 480. Ingaphezulu kobungakanani kunye nomgangatho weefowuni eziphakathi-eziphakathi, kwaye iya kuba nenguqulelo yamva nje ye-Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Iprosesa eya kuthi isebenzise iselfowuni iya kufikelela kumatyeli e-1 GHz kwaye iya kusebenza nge-RAM eyi-512 MB. Ngaphezulu kwedatha eyonelisayo yefowuni eyilelwe abasebenzisi abafuna i-smartphone kodwa ngaphandle kweendleko ezigqithileyo zetekhnoloji yakutshanje.
Elinye inqaku lokudibanisa koku iselfowuni yeSony Xperia J kukuba iya kuba nekhamera eyenziwe yinkampani yaseJapan kunye ne-5 megapixel sensor. Ingaphezulu kakhulu kweekhamera zenqanaba lokungena eliqhelekileyo eliphakathi kwe-2 kunye ne-3 megapixels.
Ngokubhekisele kwimemori yokugcina usetyenziso kunye nemultimedia, akuqinisekiswanga ukuba ingakanani eyakubakho evela kumzi-mveliso, kodwa ukuba i-smartphone iya kuba nenkxaso yamakhadi e-MicroSD kwaye inyuse inqanaba lememori ukuya kuthi ga kwi-32 GB.
Ibhetri ye-1700 mAh iya kuhlala ixesha elide kuba iselfowuni yenzelwe ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kwaye ayinalo unxibelelwano olisebenzisa ibhetri engaphezulu. Kuhleli ukwazi ukuba iyakubandakanya i-WiFi kunye ne-3G, nangona kukho ithuba elihle lokuba iyakuthwala zombini okanye ubuncinci eyokuqala.
Ixabiso eliqikelelweyo ngeselfowuni entsha yakwaSony eza kuthi thaca eBerlin 150 euro.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ice Cream Sandwich iza kwiXperia P ekupheleni kuka-Agasti
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony Xperia J, uluhlu olutsha lokungena lukaSony
Ndixolele ukuyithetha ngolu hlobo, ayisiyo 'kungeno' okanye kuluhlu olusezantsi, iphakathi. Ezisezantsi zifana ne-Xpedia mini kunye ne-mini pro okanye njenge-Galaxy Y / Pro, okanye uhlobo olufanayo lweXpedia.
UYesu Jimenez sitsho
Kubonakala kungabizi kakhulu into enayo. Ndiyathemba ukuba iyinyani…
Phendula Jesús Jiménez
Inguqulelo yamva nje ye-Android ayisiyiSandwich ye-Ice Cream